Umqondisi we-IT: Ubuciko bokuphatha i-Technology and Systems Unit | Kusuka kuLinux
Umqondisi we-IT: Ubuciko bokuphatha i-Technology and Systems Unit
Njengoba kunikezwe ukuthi eminyakeni engaphezu kwengu-2 edlule sabhala nge- Ochwepheshe be-IT, owaziwa ngaphansi kwegama le- SysAdmins y I-DevOps, namuhla sizonikezela lolu shicilelo ku-IT Professional okufanele kube yisinyathelo esilandelayo esinengqondo endaweni yase Ulwazi Nobuchwepheshe Bokuxhumana, okungukuthi, uku "UMqondisi we-IT".
Khumbula ukuthi izikhathi eziningi, kuya ngohlobo nosayizi wenhlangano nezwe okukhulunywa ngalo, a "UMqondisi we-IT", ingaqanjwa ngaphansi kwamanye amagama. Kwesinye isikhathi kuvame ukuthi: Umphathi, uBoss o UMqondisi Wezobuchwepheshe Bolwazi ngeSpanishi, noma Isikhulu Esibhekele Ubuchwepheshe (i-CTO) ngesiNgisi.
ISysadmin: Ubuciko Bokuba Isistimu Nomlawuli Weseva
Futhi kwezinye izimo, zivame ukuhlotshaniswa nalabo abaphethe i- AmaHhovisi Ezinhlelo Zolwazi ngeSpanishi, noma Umphathi Omkhulu Wolwazi (i-CIO) ngesiNgisi. Kodwa-ke, lawa futhi kufanele abe amacala ahlukene ama-2, kaningi avame ukuphatha okukodwa kuphela "UMqondisi we-IT" ngaphakathi kwenhlangano.
1 I-SysAdmins ne-DevOps: Isinyathelo esisodwa ngaphambi koMqondisi we-IT
2 Umqondisi we-IT: Umholi Wophiko Lwezobuchwepheshe Nezihlelo
2.1 Yini futhi yini okufanele ibe nguMqondisi we-IT?
2.2 Izimfanelo namakhono okuba uchwepheshe ovelele we-IT kuleso sikhundla
2.3 Umqondisi we-IT: Pro Free Software, Open Source ne-GNU / Linux
I-SysAdmins ne-DevOps: Isinyathelo esisodwa ngaphambi koMqondisi we-IT
Iningi lochwepheshe be-IT livame ukuqala ngaphakathi kwenhlangano yomphakathi noma yangasese, noma, njenge Abahlaziyi bekhompyutha (Ochwepheshe bokusekela abasebenzisi bekhompyutha) noma Abahlaziyi bezinhlelo (Onjiniyela / Abahleli).
Ngemuva kwalokho, bathambekele ekukhuleni nasekuguqukeni kwezikhundla, njenge, Abahlaziyi benethiwekhi nokuxhumana kubathandi behadiwe, noma Ochwepheshe bokuthuthukiswa kwezinhlelo kubathandi beSoftware. Kulezi zikhundla, Ochwepheshe be-IT abavela kuwo womabili amagatsha bavame ukuba Abaphathi Besistimu (SysAdmins) y Abathuthukisi Bokusebenza (DevOps).
Ekugcineni, abaningi bathambekele ekuqhubekeni bekhula ngaphakathi kwezinhlangano zabo noma izinkampani, begxumela ezikhundleni ze Abaphathi noma Abaphathi bamaqembu e-IT (ochwepheshe / onjiniyela / abaphathi) kuze kube kufinyelela isikhundla se- "UMqondisi we-IT", okuyisikhundla somuntu onolwazi oluningi olusebenzayo (lwangempela) kwezobuchwepheshe nokuphatha, emkhakheni wezinsizakusebenza zabantu nezezezimali.
I-DevOps iqhathaniswa neSysAdmin: Izimbangi noma abahlanganyeli?
Umqondisi we-IT: Umholi Wophiko Lwezobuchwepheshe Nezihlelo
Yini futhi yini okufanele ibe nguMqondisi we-IT?
Njengoba sishilo ekuqaleni, ngokuyisisekelo a "UMqondisi we-IT" Kuyinto a Umphathi, uBoss o UMqondisi Wezobuchwepheshe Bolwazi (Isikhulu Esiphezulu Sezobuchwepheshe - i-CTO), ngakho-ke sizobheka encazelweni elandelayo yesikhundla esishiwoyo:
"Ungochwepheshe obhekele ukuklama kanye / noma ukuthuthukisa amasistimu ezobuchwepheshe enza lula ukuphathwa nezinqubo enhlanganweni." Ukukhulisa ulwazi
"Unguchwepheshe obhekele ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo ze-IT zenza ukuthi inhlangano ikwazi ukufeza izinhloso zayo futhi isekele izifiso zayo zokuphinda zenziwe kabusha / zenguquko. Baqapha izinhlelo ze-IT ezikhona ukuqinisekisa ukuthi isikhathi sokuphumula esiphansi kanye nokutholakala okuphezulu, futhi baqhuba ukwamukelwa kwezinhlelo ezintsha nobuchwepheshe ukwenza ngcono ukusebenza kwenhlangano kanye nesimo sokuncintisana." Ukukhulisa ulwazi
Futhi ukucacisa ukuthi kungani Ochwepheshe be-IT yesikhundla se I-CTO imvamisa ihlobana noma ithathe imisebenzi yesikhundla I-CIO, sizocacisa umqondo wokugcina:
"Unguchwepheshe obhekele ukuphatha ukugeleza kolwazi okugcinwe nokuhlelwe ngendlela nge-software etholakalayo ukuze isetshenziswe ekwenzeni izinqumo enhlanganweni." Ukukhulisa ulwazi
"Unguchwepheshe obhekele izinhlelo zobuchwepheshe bolwazi zenkampani ezingeni lenqubo nasendaweni yokubuka ehlelayo. I-CIO ihlaziya ukuthi yiziphi izinzuzo inkampani engazithola kubuchwepheshe obusha, ibone ukuthi iziphi ezithakazelisa kakhulu inkampani, futhi ihlole ukusebenza kwayo. Igxile ekwenzeni ngcono ukusebenza kahle kwezinqubo zangaphakathi ukuze kuqinisekiswe ukuxhumana okusebenzayo futhi kugcine inhlangano isebenza kahle nangokukhiqiza." Ukukhulisa ulwazi
Izimfanelo namakhono okuba uchwepheshe ovelele we-IT kuleso sikhundla
Uma sekucacile, okuyi- "UMqondisi we-IT" o I-CTOKuhlala kuphela ukuphela ngesifinyezo esifushane futhi esihle sezimfanelo zakho ezinhle namakhono azokwenza uphumelele emisebenzini yakho.
Phakathi kokujwayelekile singasho kabanzi okulandelayo:
Yiba ngumholi olungile (ngaphezu komphathi omuhle): Kuwo wonke amaThimba e-IT azophatha ngemisebenzi ehlukene, amandla nokulinganiselwa, okufanele uzame ukukwazi ngokujula, ukuze ubasekele ngempumelelo, kunokumane ubadinge ukuthi bahlangabezane nezinhloso. Ngalokhu, kubalulekile ukuba namakhono amahle kakhulu wokuxhumana nawokuxhumana nabantu.
Yazi ngokujula inhlangano, imodeli yayo yebhizinisi, izinhloso nezinhloso: Ukuze ukwazi ukubona ngeso lengqondo, ukugcina nokubona kusengaphambili inkundla efanelekayo yobuchwepheshe okufanele ihambisane nesikhathi ngasinye senhlangano, ukuyigcina iphambili kwezobuchwepheshe emkhakheni wayo (emkhakheni). Ngalokhu, kubalulekile ukwazi ukuba nokubona okuhle kwezinhloso, ukuxazulula izinkinga namakhono okwenza izinqumo.
Yenza okuningi bese udlulisela okuningi: Ukwazi ukuthi ungayifeza kanjani ngempumelelo inani elihle lamaphrojekthi akhona nangaphansi kokwakhiwa, ngenkathi uthembele ngempumelelo eqenjini ngalinye lomsebenzi walo ngaphandle kokwehliswa ubukhulu noma ubuningi bamaphrojekthi aphethwe. Ukweluleka nokuqondisa iqembu, esikhundleni sokwenza umsebenzi wabanye noma ukwenza ukugadwa ngokweqile. Ngalokhu, kubalulekile ukuba namakhono amahle wokuhleleka nokusebenza kwesikhathi.
Phakathi kokucacile singasho ngokufushane okulandelayo:
Yazi futhi ugcine usesikhathini maqondana nobuchwepheshe obusha nayo yonke imithetho ye-IT, kuzwelonke nakwamanye amazwe.
Qalisa futhi uqinisekise ukuphumelela kobuchwepheshe obusha, obufana ne-Robust izicelo zebhizinisi (i-ERP, i-CRM, phakathi kwezinye), i-Web 2.0 Technologies, i-Cloud Computing, i-Big Data, i-Deep Learning ne-Artificial Intelligence, phakathi kokunye okuningi, njenge-Marketing digital ne-E -ibhizinisi.
Qinisa futhi uqinise ukuphepha kwe-IT kwenhlangano (ingqalasizinda, izinqubo, idatha) ngezinyathelo zamanje nezamandla ze-IT ezingasetshenziswa.
Unolwazi olunzulu lwezinhlelo zamakhompiyutha, imishini, amanethiwekhi kanye nemikhiqizo yesoftware, ngokuvamile, kepha ikakhulukazi leyo ephethwe yinhlangano.
Kukho konke lokhu kufanele kucace ukuthi okuhle "UMqondisi we-IT" kumele kube umphumela we-IT Professional onayo noma okufanele abe nayo ulwazi oluqinile kanye nokuhlangenwe nakho embonini yezobuchwepheshe, kuhle ulwazi lobuchwepheshe kusuka kwizikhundla zakho zangaphambilini ze-IT, futhi amakhono amahle nolwazi ekuphathweni (ekuphathweni / ekuhlelweni) kwezinsizakusebenza zabantu, ezezimali nezobuchwepheshe.
Umqondisi we-IT: I-Pro Free Software, Umthombo Ovulekile ne-GNU / Linux
Futhi-ke, ngokombono wethu, kuhle "UMqondisi we-IT" kumele wazi ukuthi ungakuhlola kanjani ukusetshenziswa nokuqaliswa kwe- Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux ngaphakathi kwenhlangano yakho. Ukwenza izinyathelo ezinjengalezi:
Ukwakhiwa kweHhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile (I-Open Source Program Office - OSPO)
Thuthukisa ukuthuthukiswa kanye nokusetshenziswa kwangaphakathi kwamathuluzi wamahhala futhi avulekile, ikakhulukazi ama-Operating Systems we-GNU / Linux, kuyo yonke leyo misebenzi lapho ingabuyisela ngokwanelisayo iWindows ne-MacOS, kokubili ukonga izindleko nokuphepha kwekhompyutha.
Ukwakhiwa, ukwenziwa nokuthengiswa kwemikhiqizo ye-IT ehlonipha ubumfihlo babasebenzisi bayo futhi engasebenzisi kabi noma yokusebenzisa kabi imininingwane yabo.
I-OSPO: Ihhovisi Lezinhlelo Zomthombo Ovulekile. I-Idea yeqembu le-TODO
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" ngecala le- «Director TI», nokuthi ungaba nguchwepheshe omuhle kanjani kulesi sikhundla, okuthi izikhathi eziningi kuya ngenhlangano kuvamise ukuba nemisebenzi embalwa noma eminingi kuneminye, kepha ngokujwayelekile kuphethwe ukuphathwa kwezobuchwepheshe okufanayo ukufeza izinhloso zebhizinisi; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Umqondisi we-IT: Ubuciko bokuphatha i-Technology and Systems Unit
Ngemuva kokuthengwa kwe-Audacity, uhlelo lokusebenza manje luvumela ukuqoqwa kwedatha ukuze kusizakale iziphathimandla zikahulumeni